Fitantanana ny ranomasina sy ny morontsiraka - Blue Ventures
Fikarohana & fitaovana
Facebook Twitter Instagram Linkedin valopy
Ahoana ny fomba fiasantsika
Vaovao & tantara
Fikarohana sy fitaovana
Fitantanana ny ranomasina sy ny morontsiraka
Ny fiheverana ny fidirana sy ny tombontsoa azo avy amin'ny fiompiana akoho eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny Photovoice: Fandinihana tranga iray ao anatin'ny faritra an-dranomasina tantanin'ny faritra eto Madagasikara.
Ny mpanjono madinika dia miatrika karazana fanerena ara-tontolo iainana eto an-toerana sy maneran-tany, anisan'izany ny fihenan'ny trondro sy ny fiovan'ny toetr'andro. Any amin'ny morontsiraka atsimoandrefan'i Madagasikara, dia natsangana ny tetikasa momba ny fiompiana akoho amam-borona (CBA) ao anatin'ny faritry ny ranomasina tantanin'ny faritra (LMMA) mba hanomezana fampidiram-bola hafa ho an'ny vondrom-piarahamonina mpanjono madinika sy hanohana ny ezaka ataon'ny vondrom-piarahamonina amin'ny fampihenana ny faneren'ny jono eo an-toerana. Ity fanadihadiana ity dia nifantoka tamin'ny fahatakarana ny fomba fijerin'ny vondrom-piarahamonina momba ny fahazoana sy ny tombontsoa azo avy amin'ny tetikasa CBA roa ao anatin'ny Velondriake LMMA mahakasika ny fambolena ahidrano sy ny kôkômbra. Ny mpandray anjara dia nahitana mpamboly ahidrano, mpamboly kôkômbra, ary tsy mpamboly, ary ny fikarohana dia nandinika ny fiantraikan'ny tetikasa eo amin'ny isam-batan'olona sy ny fiarahamonina. Ny fikarohana eny an-kianja fandraisana anjara dia natao tany Tampolove, Madagasikara nandritra ny taona 2018 tamin'ny fampiasana fomba Photovoice namboarina miaraka amin'ny sary mifototra amin'ny mpandray anjara sy ny dinidinika lalina. Ny fampidirana ny tetikasa CBA ao amin'ny LMMA dia niteraka modely fitantanana vaovao, miaraka amin'ireo toeram-pambolena akoho mila 'fidirana manokana' ao anatin'ny sehatra 'misokatra malalaka' ara-tantara. Nasehon'ny vokatra fa neken'ny vondrom-piarahamonina io fanovana fidirana ho an'ny faritra amorontsiraka io, miaraka amin'ny tombotsoan'ny fiompiana trondro ao anatin'izany ny fidiram-bola azo vinaniana kokoa sy ny fifampizarana tombotsoa manerana ny fiaraha-monina, izay toa nihoatra noho ny fahaverezan'ny fahafahana miditra amin'ny ampahany amin'ny toeram-panjonoana nentim-paharazana. Na izany aza, ilaina ny fikarohana fanampiny mba hahatakarana bebe kokoa ny fiantraikan'ny vehivavy sy ireo mpikambana hafa ao amin'ny vondrom-piarahamonina voahilikilika. Noho ny tombontsoa notononin'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina, ny maodely CBA-LMMA dia mety azo ampiharina amin'ireo toerana hafa amoron-tsiraka ao amin'ny Ranomasimbe Indianina Andrefana (WIO) izay ilàna sy ilàna ny fampifanarahana tsara ny fivelomana hafa mifototra amin'ny fiaraha-monina sy ny fiarovana ny ranomasina. .
Lara Funk, A. Meriwether W. Wilson, Charlotte Gough, Kitty Brayne, Noelinaud Robert Djerryh
Fitantanana ny haran-dranomasina: Fanamafisana ny fiaraha-monina sy ny fomba fiaraha-miasa
Fomba fijery vaovao momba ny fomba fanjonoana taloha: Ny haavony, ny toe-javatra ary ny fiantraikan'ny trawling ambany
Fanamafisana ny vehivavy sy fanaraha-maso fandraisana anjara amin'ny jono madinika ao Timor-Leste
Ahoana ny fomba hahazoana "30 amin'ny 30" mirindra sy marina
Fomba fanovàna ny lahy sy ny vavy amin'ny fampivoarana ny fitovian'ny lahy sy ny vavy amin'ny rafi-piaraha-monina ara-tontolo iainana amin'ny haran-dranomasina
Fanadihadiana momba ny fikarohana 01: Trawling ambany sy ny krizin'ny toetr'andro
Diniho ny rehetra
Midira amin'ny hetsika manerantany
Manaova hetsika ho an'ny ranomasina
44 + (0) 117 3144 661
Fiantraikany amin'ny ambaratonga
Advocacy & fanentanana
Makà fanavaozana isaky ny telo volana
Raiso amin izao
© Zo voatokana. Blue Ventures Conservation dia fiantrana voasoratra anarana any Angletera & Wales laharana 1098893
Mpifidy karazana lahatsoratra
Ny fanjonoana madinika ao Thailandy no vato fehizoron'ny fahasalamana ara-tsosialy, ara-toekarena ary ara-tsakafo ho an'ireo vondrom-piarahamonina miaina amin'ny ankamaroan'ny morontsiraka efa ho 3,000 kilometatra eo ho eo.
Any amin'ny faritra atsimon'i Trang dia manohana ireo vondrom-piarahamonina miankin-doha amin'ny jono akaikin'ny morontsiraka izahay - indrindra ho an'ny foza, makamba ary angisy − miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Save Andaman Network (SAN).
Manome fiofanana sy fitaovana izahay hanampiana ny fampandrosoana ny fandaminana, ny fanaraha-maso sy ny fitantanana ny jono tarihin'ny vondrom-piarahamonina, ary ny fananganana orinasa sosialy an'ny vondrom-piarahamonina izay mamatsy vola sy manohana ny ezaka fiarovana eo an-toerana.
Nanomboka tamin'ny 2016, ny asantsika any Timor-Leste dia nivoatra ho hetsika mavitrika manohana ny fitantanana ny ranomasina sy ny fivelomana an-dranomasina any amin'ny firenena vaovao indrindra any Azia. Avy amin'ny fiaviantsika ao amin'ny Nosy Atauro, heverina ho anisan'ny ambony indrindra amin'ny zavamananaina an-dranomasina eto an-tany, dia miara-miasa amin'ireo vondrom-piarahamonina maro ao amin'ny nosy sy ny tanibe izahay ankehitriny mba hahazoana antoka fa ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana dia afaka mahazo safidy fivelomana maharitra isan-karazany mba hanamaivanana ny tsindry amin'ny jono. momba ny haran-dranomasina manan-danja sy ny tontolo iainana ahi-maitso.
Mandray anjara amin'ireo vondrom-piarahamonina izahay amin'ny fanaraha-maso ny zavamananaina an-dranomasina izay mbola tsy nojerena ao Timor-Leste, ary amin'ny fitantanana ny harena an-dranomasina eo an-toerana amin'ny alàlan'ny lalàna mahazatra eo an-toerana antsoina hoe Tara Bandu. Miaraka amin'ny ezaka ataontsika amin'ny fiarovana ny vondrom-piarahamonina, dia nanao mpisava lalana ny fikambanan'ny trano fandraisam-bahiny voalohany ao Timor-Leste, izay manome fidiram-bola tsy tapaka avy amin'ny fitsidihan'ny mpizaha tany ary niteraka fahalianana amin'ny famerenana indray ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny tanibe. Amin'ny fampiasana trano fonenana ho ivon-toerana, ny vondrom-piarahamonina dia napetraka tsara mba hampiantrano ny fifanakalozam-pianarana, ny hetsika fanofanana, ary ny hetsika ho toy ny sehatra fanentanana mba handraisana anjara sy hanentanana ny vondrom-piarahamonina amin'ny fitantanana ny jono sy ny fahasamihafan'ny fivelomana. Ny fifanakalozam-bola dia nitarika ho amin'ny vondrom-piarahamonina manana fanao tsara indrindra sy manamafy ny fikambanana, ary ny fahafahana hanangana tambajotra ofisialy manerana ny firenena.
Ny ekipanay ao Dili renivohitr'i Timor-Leste dia miara-miasa akaiky amin'ny governemanta, fikambanana sivily ary mpiara-miombon'antoka ONG.
Tahaka ireo mpifanolo-bodirindrina aminy ao amin'ny faritra mafana amin'ny zavamananaina an-dranomasina any Mozambika Avaratra, Tanzania dia manana ny sasany amin'ireo tontolo iainana an-dranomasina isan-karazany indrindra ao amin'ny Ranomasimbe Indianina. Ireo toeram-ponenana ireo dia miatrika fanamby tsy mbola nisy toa azy noho ny fanjonoana tafahoatra sy ny fiovan'ny toetr'andro.
Niara-niasa tamin'ireo vondrom-piarahamonina sy fikambanana eo an-toerana ny ekipa Tanzaniana anay mba hanohanana ny fiarovana an-dranomasina notarihan'ny eto an-toerana nanomboka tamin'ny taona 2016. Niitatra avy any Zanzibar ny asanay ka hatrany amin'ny faritra Tanibe ao Tanga, Lindi ary Kilwa izay miara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka eo an-toerana ny teknisianinay mba hanampiana ireo vondrom-piarahamonina hanamafy ny rafi-pitantanana. , miasa amin'ny alalan'ny tora-pasika fitantanana vondrona (BMU), Shehia Fishing Committees (SFCs) valan-javaboary an-dranomasina sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny fitantanana ny jono faritra (CFMAs).
Ireo mpiara-miasa aminay Mwambao Coastal Community Network, marinecultures.org ary Sea Sense nitarika fanafainganana miavaka amin'ny fandraisana ny fitantanana sy ny fiarovana ny jono mifototra amin'ny fiaraha-monina tato anatin'ny taona vitsivitsy, indrindra amin'ny alalan'ny fampiasana fanakatonana ny jono ao anatin'ny fotoana fohy mba hanamafisana ny fiarovana ny vondrom-piarahamonina midadasika kokoa.
Miaraka amin'ny iray amin'ireo morontsiraka lava indrindra any Afrika, ny tontolo iainana an-dranomasina isan-karazany ao Somalia dia manohana ny fanjonoana any amoron-tsiraka sy any ivelany. Nanimba ny fahaizan'ny firenena amin'ny fitantanana ny jono ny fifandonana am-polony taona maro, miaraka amin'ireo sambo indostrialy vahiny maro no manjono tsy voasazy, ary tsy dia miraharaha loatra ny maha zava-dehibe ny fanjonoana amorontsiraka ao Somalia ho an'ny fivelomana eo an-toerana sy ny fanjarian-tsakafo.
Ny vanim-potoan'ny fitoniana ara-politika sy ara-tsosialy izay tsy mbola nisy toy izany tato anatin'ny folo taona farany izao dia manolotra fahafahana vaovao hamahana ireo fanamby taloha, ary hahatsapa ny fahafahana lehibe azon'ny fanjonoana sy ny fiarovana ny morontsiraka tantana tsara ho an'i Somalia. Manangana fiaraha-miasa amin'ireo fikambanan'ny vondrom-piarahamonina ao Somalia izahay mba hanamafisana ny fahaizany sy ny fahaizany manampy ireo vondrom-piarahamonina amorontsiraka amin'ny fitantanana ny jono ho an'ny fanjarian-tsakafo, ny fivelomana ary ny fiarovana.
Anisan'ny ivon'ny 'coral triangle' i Filipina ny fahasamihafan'ny zavamananaina an-dranomasina maneran-tany, miaraka amin'ny karazan-javamaniry an-dranomasina tsy manam-paharoa. Maherin'ny antsasa-manilan'ny mponina 107 tapitrisa (55.6%) no mipetraka any ambanivohitra, ary eo amin'ny telo ampahefany no miankina amin'ny fambolena na ny jono ho loharanom-pivelomana voalohany.
Miaraka amin'ny People and the Sea mpiara-miombon'antoka eo an-toerana, miasa any amin'ny faritra atsinanan'i Visayas izahay hanohana ireo vondrom-piarahamonina amorontsiraka mba hananganana ny fiarovana an-dranomasina sy ny fitantanana ny jono tarihina eo an-toerana izay tohanan'ny rafitra angon-drakitra mandray anjara izay mametraka porofo eo am-pelatanan'ny vondrom-piarahamonina.
Ny firenena lehibe indrindra ao amin'ny Faritr'i Pasifika Andrefana, ny haran-dranomasina sy ny honko any Papouasie-Nouvelle-Guinée dia isan'ny isan-karazany sy midadasika indrindra eran-tany. Ny Papouasie-Nouvelle-Guinée dia manana tantara lava momba ny fomba nentim-paharazana momba ny fitantanana ny jono, ary ny filàna lehibe momba ny fiarovana an-dranomasina tsy voavaly.
Nanohana ny mpiara-miasa eto an-toerana izahay Eco Custodian Advocates nanomboka tamin'ny 2019 tany Milne Bay, malaza amin'ny ala honko midadasika sy ny haran-dranomasina. Manitatra izany fanohanana izany amin'ny fikambanana hafa ao an-toerana any Papouasie-Nouvelle-Guinée izahay izao, mifantoka amin'ny fanohanana ny fananganana LMMA mahazatra izay manome fomba fiasa mifanentana eo an-toerana amin'ny fitantanana ny jono tarihin'ny vondrom-piarahamonina miorina amin'ny fomban-drazana eo an-toerana.
Indonezia dia misy nosy saika 17,500 miparitaka manerana ny faritra telo. Ity firenena archipelagic ity dia manana morontsiraka lava indrindra - ary loharanon-jono amoron-dranomasina lehibe indrindra - amin'ny firenena rehetra eto an-tany. Ny XNUMX isan-jaton'ny famokarana hazan-dranomasina ao Indonezia dia avy amin'ny jono madinika, izay tohanan'ny tontolo iainana an-dranomasina maro karazana indrindra eto an-tany, fantatra amin'ny anarana hoe Coral Triangle.
Any Indonezia, mpiara-miasa amin'ny Blue Ventures Yayasan Pesisir Lestari, miorina ao Bali, miara-miasa amin'ireo fikambanana eo an-toerana Forkani, Yayasan LINI, Yapeka, Yayasan Planet Indonezia, Foneb, Komanangi, JARI, Yayasan Tananua Flores, Baileo, AKAR, Japesda, Yayasan Mitra Insani ary Yayasan Hutan Biru.
Ireo mpiara-miombon'antoka ireo dia manohana ny fomba fiasa mifototra amin'ny fiaraha-monina amin'ny fiarovana ny haran-dranomasina sy ny ala honko amin'ny toerana 22 manerana ny faritany fito. Ny fitsabahana dia amboarina amin'ny toe-javatra tsirairay − ny jono eo an-toerana, ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fiaraha-monina, ny rojo famatsiana hazan-dranomasina, ny rafitra ara-dalàna ary ny fomban-drazana mifehy ny fitantanana sy ny fiarovana ny jono.
Nanomboka tamin'ny taona 2019 no nampiarahanay ireo mpiara-miombon'antoka ireo ao anatin'ny tambajotram-pianarana miaraka amin'ireo fikambanana Indoneziana manokana amin'ny fanohanana ny fiarovana an-dranomasina mifototra amin'ny fiarahamonina. Ny tambajotra dia mifototra amin'ny soatoavina iraisan'ireo fikambanana, anisan'izany ny fanoloran-tena hampiroborobo ny zon'ny vondrom-piarahamonina mpanjono nentim-paharazana amin'ny fiarovana. Fito ambin'ny folo amin'ireo toerana voasolo tena ao anatin'ity vondrona ity no mametraka ny fitantanana an-dranomasina eo an-toerana amin'ny alalan'ny fitondrana sy fomban-drazana. Ity vondrona ity, izay ahitana toerana maro any Atsinanana Indonezia, dia manome fahafahana lehibe hifampizarana fianarana amin'ny fomba nentim-paharazana amin'ny fitantanana ny ranomasina sy ny jono.
Any Kalimantan Andrefana sy Sumatra Atsinanana dia manohana ireo vondrom-piarahamonina amorontsiraka miankin-doha amin'ny ala honko izahay mba hampidirana ny jono honko sy ny fitantanana ny ala, miaraka amin'ireo hetsika hampandrosoana fivelomana hafa na hanatsarana ny fivelomana efa misy. Any Sulawesi Avaratra izahay dia manohana ny fampivoarana orinasam-pizahan-tany ara-tontolo iainana, toy ny trano fandraisam-bahiny, izay mampiovaova ny fivelomana eo an-toerana ary manome lanja bebe kokoa ny tontolo iainana an-dranomasina arovana sy salama. Manerana ny asantsika any Indonezia, izay ilain'ireo vondrom-piarahamonina mpiara-miombon'antoka amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana, dia manohana ny fampidirana ireo hetsika fanatsarana ny fahasalamana amin'ny fitsabahantsika.
Manohy miasa any India miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka maharitra izahay Dakshin Foundation. Miara-miasa amin'ny toerana telo miavaka izahay; ny vondronosy Lakshadweep, ny faritra amorontsirak'i Odisha sy ny Nosy Andaman.
Ny fanjonoana tafahoatra dia nitarika ho amin'ny fampihenana ny fanjonoana trondro, nanohitra ny hoavin'ny vondrom-piarahamonina mpanjono nentim-paharazana maro.
Ny fiaraha-miombon'antoka dia miasa amin'ny fananganana ny fahafahan'ny vondrom-piarahamonina mitantana ny jono amoron-tsiraka, ary manatsara ny fahasalaman'ny vondrom-piarahamonina mpanjono, ho an'ny fahasalamana maharitra ho an'ny fiarahamonina sy ny toeram-panjonoana.
Ny morontsirak'i Kenya dia manohana ny fahasamihafan'ny toeram-ponenana an-dranomasina sy morontsiraka tropikaly. Atahorana ireo rano ireo noho ny fihanaky ny fomba fanjonoana manimba sy ny fijinjana tafahoatra ao anatin'ny sehatry ny jono asa tanana sy ara-barotra.
Ny fomba fiasanay any Kenya dia mifantoka amin'ny fanamafisana ny Beach Management Units (BMUs) hanatsarana ny fitantanana ny jono. Hatramin'ny taona 2016, ny ekipa ara-teknika any Mombasa dia nanome fanohanana, fanoroana ary fanampiana ho an'ireo mpiara-miombon'antoka eo an-toerana ao anatin'izany ny Pate Marine Community Conservancy (PMCC), Northern Rangelands Trust (NRT) ary Fampandrosoana ny harena an-dranomasina sy an-dranomasina (COMRED).
Ireo fiaraha-miasa ireo dia nahitana zava-bita niavaka teo amin'ny fitantanana sy ny fiarovana ny jono notarihan'ny vondrom-piarahamonina, anisan'izany ny fanofanana sy fanoroana ireo mpitarika ny BMU any amin'ny vondrom-piarahamonina XNUMX ao amin'ny Faritra Kwale sy Lamu.
Any amin'ny lakandrano avaratr'i Mozambika no misy ireo nosy Kaomoro, faritra iray ahitana ny zavamananaina an-dranomasina faharoa avo indrindra eran-tany taorian'ny Coral Triangle. Io zava-manan'aina manan-danja maneran-tany io no fototry ny fiveloman'ny morontsiraka sy ny fanjarian-tsakafo, saingy tandindonin-doza noho ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny fitrandrahana tafahoatra ny jono an-dranomasina.
Nanana toerana maharitra izahay manohana ny fiarovana ny ranomasina sy ny fitantanana ny jono any Kaomoro hatramin'ny taona 2015, manome fanohanana ireo mpiara-miombon'antoka eo an-toerana, andrim-panjakana ary vondrom-piarahamonina.
Ao Anjouan, nosy faharoa lehibe indrindra sy be mponina indrindra ao amin'ny vondronosy Kaomoro, miara-miasa akaiky amin'ny ONG nasionaly izahay. Dahari. Ny fiaraha-miombon'antoka dia namolavola drafitra azo adika ho an'ny fitantanana an-dranomasina mifototra amin'ny fiarahamonina, izay nahitana ny fananganana ny faritra an-dranomasina voalohany teo an-toerana − anisan'izany ny fanakatonana an-dranomasina vonjimaika sy maharitra − natao hiarovana ny tontolo iainana amin'ny haran-dranomasina izay manohana ny toekaren'ny morontsiraka.
Ity fomba fiasa ity, izay miitatra haingana manerana an'i Kaomoro, dia mampiseho ihany koa ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fanomezana hery ny vehivavy − amin'ny alalan'ny fikambanan'ny vehivavy mpanjono eo an-toerana − handray anjara amin'ny fanaraha-maso sy ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny jono.
Any amin'ny nosy Moheli mifanolo-bodirindrina sy ny nosy frantsay Mayotte, izahay dia manohana ny Moheli National Park ary ny Mayotte Marine Natural Park miaraka amin'ny ezaka hanamafisana ny fandraisana anjaran'ny vondrom-piarahamonina amin'ny fitantanana sy ny fiarovana ny jono.
Ny tontolo iainana an-dranomasina ao Belize dia mahafaoka ny sasany amin'ireo zavaboahary an-dranomasina manan-danja indrindra ao amin'ny Ranomasina Karaiba, anisan'izany ny haran-dranomasina midadasika, ala honko ary ny tontolo iainana ahi-maitso. Nitazona toerana maharitra ao Belize izahay nanomboka tamin'ny 2010, manohana ny jono isan-karazany sy ny ezaka fiarovana avy amin'ny toby misy anay ao Sarteneja, vondrom-piarahamonina mpanjono lehibe indrindra ao Belize.
Miara-miasa akaiky amin'ny Departemantan'ny jono Belize, mpitantana ny MPA, kaoperativa mpanjono ary fikambanan'ny mpanjono izahay, ary mandray anjara mavitrika amin'ny fampiroboroboana ny fananganana jono nasionaly ho an'ny trondro liona manafika. Niara-niasa tamin'ny mpiara-miombon'antoka amorontsiraka izahay mba hamolavola paikady nasionaly amin'ny fitantanana ny liona, anisan'izany ny fandefasana ny Vondrona miasa amin'ny Lionfish National.
Nitarika fandaharan'asa fanaraha-maso sy fanombanana ny MPA folo taona tao amin'ny Tahirin-dranomasina Bacalar Chico izahay, ary nanome fiofanana momba ny fomba fanaraha-maso ny haran-dranomasina ho an'ireo manam-pahefana enina ao amin'ny MPA ao Belize, anisan'izany ny fanampiana amin'ny fametrahana tanjona ho an'ny fitantanam-bola Turneffe Atoll Marine Reserve, ny MPA lehibe indrindra ao Belize.
Ny ekipanay dia manohana ny vondrom-piarahamonina mpanjono sy vondrona mpiaro ny tontolo iainana mba hiantohana fa ny tombontsoa eo an-toerana dia mirindra tsara amin'ny famolavolana sy fampiharana ny fiarovana an-dranomasina sy ny fitantanana ny jono, fanatsarana ny fahombiazan'ny fiaraha-mitantana ny faritra fiarovana.
Niara-niasa tamin'ireo vondrom-piarahamonina ny ekipanay Mozambikana mba hamolavola fomba fiasa eo an-toerana momba ny fitantanana ny jono sy ny fiarovana ny ranomasina nanomboka tamin'ny taona 2015.
Ny fomba fiasanay dia mifantoka amin'ny fanohanana sy fanamafisana ireo fikambanana eo an-toerana sy ny Filankevitry ny Jono (CCP) mba hahatakarana bebe kokoa ny jono eo an-toerana, handraisana fanapahan-kevitra tsara amin'ny fitantanana amin'ny fanarenana ny jono, ary hanombantombana ny fiantraikan'ny hetsika fitantanana. Ity asa ity dia novolavolaina tamin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mpiara-miombon'antoka Oikos- Cooperação sy Desenvolvimento any amin'ny faritanin'i Nampula sy ny valan-javaboary afrikanina ao amin'ny faritanin'i Inhambane.
Nanimba vondrom-piarahamonina amorontsiraka maro ny fanamby ara-piarovana sy ny firongatry ny ezaka fiarovana an-dranomasina any amin'ny faritra maro ao Cabo Delgado, izay indrisy fa mijanona ny asantsika ankehitriny.
Toy ny eto Madagasikara, noho ny fahasahiranan'ny morontsiraka avo dia avo sy ny tsy fahampian'ny fidirana amin'ny serivisy fototra, miaraka amin'ny asa atao amin'ny fiarovana dia manamora ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanome tolotra ara-pahasalamana izahay, amin'ny alàlan'ny fomba fiasa mitambatra momba ny fahasalamana.
Nanomboka teto Madagasikara tamin'ny taona 2003 ny dian'ny Blue Ventures, ary nanohana ireo vondrom-piarahamonina amin'ny fiarovana an-dranomasina manerana ny firenena izahay hatramin'izay. Manana fandaharan'asa faritra dimy izahay manerana ny morontsiraka andrefan'i Madagasikara, ary koa ny biraom-paritra ao amin'ny tanànan'i Toliara, Morondava ary Ambanja. Eto Antananarivo Renivohitra no misy ny foibem-pirenentsika.
Amin'ireo toerana rehetra ireo dia manohana vondrom-piarahamonina izahay amin'ny fananganana faritra an-dranomasina tantanan'ny faritra (LMMA), ary miara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny governemanta mba hahazoana ny fankatoavana nasionaly amin'ny hetsika fiarovana ny vondrom-piarahamonina. Novolavolain'ny Blue Ventures voalohany teto Madagasikara tamin'ny taona 2006, ny foto-kevitra LMMA dia nalain'ny vondrom-piarahamonina amin'ny toerana an-jatony amin'ny morontsiraka an'arivony kilometatra, mandrakotra efa ho ampahadimin'ny fanambanin'ny ranomasina eto Madagasikara. Ny fikarohana ataontsika eto Madagasikara dia nampiseho porofo manan-danja maneran-tany momba ny tombotsoan'ny LMMA jono ary fiarovana ny tontolo iainana.
Ny asantsika dia mifantoka amin'ny fanamafisana ny andrim-piarahamonina eo amin'ny fitantanana sy ny fitantanana an-dranomasina, ary ny fitarihana fomba vaovao hanentanana ny fiaraha-monina amin'ny fiarovana ny ranomasina. Ireo fanavaozana ireo dia nahitana ny fananganana toeram-piompiana kôkômbra voalohany eran-tany ary toeram-pambolena voaloham-bokatra voalohany eto amin'ny firenena. tetikasa manga manga manga.
Eo amin'ny sehatra nasionaly, efa nampidirintsika ny MIHARI tambajotra, sehatra fiarahamonim-pirenena mahaleo tena ankehitriny izay mampivondrona toerana LMMA 219 manerana ny firenena sy fikambanana mpiara-miombon'antoka 25 manohana ny fiarovana.. Ny ekipantsika politika koa dia mandray anjara mavitrika amin'ny fiarovana ny lalàna matanjaka kokoa mba hiarovana ny zo sy ny tombontsoan'ny vondrom-piarahamonina mpanjono, ary hanesorana ny jono indostrialy manimba amin'ny rano amorontsiraka.
Noho ny tsy fisian'ny tolotra fototra any amin'ny faritra lavitra morontsiraka eto Madagasikara, dia manampy ny vondrom-piarahamonina ihany koa izahay hahazo fitsaboana fototra amin'ny alalan'ny fanofanana sy fanohanana ny vehivavy ho mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka. Tsy manolo ny rafi-pahasalamam-panjakana izahay, fa miasa amin'ny fanamafisana ireo rafitra efa misy amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mpisehatra ara-pahasalamana sy ONG manampahaizana manokana. Eo koa ny fandraisan’ny olom-pirenena an’i Madagasikara tambajotra ara-pahasalamana, izay mampivondrona fikambanana mpiara-miombon'antoka 40 mba hamahana ny filàna ara-pahasalamana ho an'ireo vondrom-piarahamonina monina amin'ny faritra manan-danja amin'ny fiarovana manerana ny firenena.